सेयर बजार सर्लक्कै सुत्दा पनि चम्किएका यी हुन् ५ कम्पनी, कुनको मूल्य कति बढ्यो ? » aarthikplus
सेयर बजार सर्लक्कै सुत्दा पनि चम्किएका यी हुन् ५ कम्पनी, कुनको मूल्य कति बढ्यो ?
वि.सं.२०७८ भदौ १७ बिहीवार १६:१५
सेयर बजार आज पनि पहिरो गएको छ । हिजो झिनो अंकले बढेको बजारमा आज उच्च अंकको गिरावट आएको हो । समग्रमा यससाता नेप्से करिब १७० अंकले घटेको छ । सूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । आज कारोबार रकम साढे ९ अर्बमा सीमित भएको छ ।
आज सेयर बजार मापक सूचक नेप्से ५०.२८ अंकले घटेर २९२६.७४ विन्दुमा आइपुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज २३० कम्पनीको ९ अर्ब ५० करोड ५९ लाख रुपैयाँ बढीको १ करोड ५ लाख ७७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।
आज कारोबारमा आएका १३ वटै समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । फाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै ३.६८ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै, विकास बैंक, हाइड्रोपावर र लगानी समूह पनि ३ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । आज कारोबारमा आएका २३० कम्पनीमध्ये जम्मा ३६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १८२ कम्पनीको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
१२ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ । आज अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको ५७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
यस्तै, अपी पावर झण्डै ३३ करोड र ङादी पावर २३ करोडसहित सर्वाधिक कारोबार हुने शीर्ष तीन भित्र रहे । उच्च अंकले बढेको बजारमा पनि आज दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको मूलय ठ्याक्कै १० प्रतिशतले बढेको छ भने मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ ।
यस्तै, चन्द्रागिरि हिल्स ५.७३, खानीखोला हाइड्रोपावर ५ प्रतिशत र डिप्रोक्स लघुवित्तका सेयर मूल्य ४.२३ प्रतिशतले बढेको छ ।घट्दो बजारमा आज नारायणी विकास बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै ६.८७ प्रतिशत गुमाएका छन् ।
News Views: 594
२० हजार कित्तासम्म भर्न मिल्ने गरि भोलीदेखि सामलिङ पावरको आइपीओ खुल्ने,यी बैंक बाट यसरी भर्नुहोस्
यी १९ लघुवित्तका सञ्चालक र सीइओलाई राष्ट्र बैंकले लगायो काँजो, किन हालेछन् भाँजो ?